1628s &quot;LIFT-OFF&quot; | EGO ITA? AKW .KWỌ images and subtitles
Tupu ịmalite vidiyo a, ha malitere oru ahụ obere oge ka njem World World 2018 gasịrị. Dika njem ahụ gara n'ihu na-aga n’ihu, ọrụ nrụpụta ọhụrụ malitere DP. -Ihe omume ndi choro igugu ajuju, nlebara anya, otu na mmasi. Vidio a bụ “Ọ BYRY na ANYB BERE?” Emere vidiyo a ọnwa atọ tupu ahapụ, yana akụkụ nke ọrụ ahụ dum. Ihe ndị a na-egosi na usoro ọrụ a na-egosi usoro ọrụ ụbọchị kwa ụbọchị na ọkwa ikpeazụ nke ọrụ ahụ. -Mgba egwu idekọ, nzukọ vidiyo, mkparịta ụka na ibe ya. O nwere ihe ndi na emeghi nkpa ma di nkpa nke DPR, akara ntụrụndụ zuru oke yana otu ndị enyi nwere nrọ nke ha. DPR IAN: Ndeewo? Kedu ka ị mere? Um ... Yabụ ... Na nkenke, m nọ na-eche ihe ọ ga-adịrị John ka ya duzie usoro nile nke ọba a… Site na mmalite ruo na njedebe Um ... Echere m na ọ ga-adị jụụ. Igosi ndi mmadu ihe na-eme n’azu. Dịka ịmara, ihe DPR egosighi. Ọ na-egosikwa anyị ego ole anyị nwetara n’ime ya. Ee, gwa m echiche gị. Ọ dị mma, ọ dị mma ... Nnọọ. Ọnwa atọ tupu ahapụta album DPR LIVE: Ee, mgbe ndị mmadụ nụrụ nke a, ha ga-enwe ihe. IAN: Ee. LIVE: Enwere m olileanya na ihe ịtụghị anya ga-amasị gị. Ka m na-ege egwu a. Site na "HERE AHA OWO" rue "GERONIMO" LIVE: Nanị ịnụ nke ahụ, "Oh, nke a abụghị ihe m tụrụ anya ya." IAN: Ee, ee. LIVE: “Gịnị mere ihe a ga-eji kpalie gị ime otú ahụ?” DPR REM: Nọgide na-aga. Belata ụda ụda ụgbọ elu Ọ bụrụ na ịgbanye mmetụta ndị ọzọ ma ọ bụ ụda n'etiti LIVE: * Mmetụta Ọ Na-akpata * Mee Mee Mee Biko: Mgbe ahụ ọ na-ada ka ihe dị adị. N'ụzọ ahụ, ịgaghị ahọrọ ụzọ doro anya. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị nwere ike ịgafe n'akụkụ ọzọ. Yabụ, ọbụlagodi na anyị elere ya ugbu a, mgbe anyị nọ ọnụ, Ma ọ bụ, dị ka ntakịrị nke "hyper loop" O nwere oge ị na-eme ihe dịka “mbugharị” dịka Star Wars. Ọ bụrụ na ịnwere ike ịme LEDs ndị ahụ obere gburugburu IAN: Si n'azụ na-ele anya n'ihu Echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ ga-apụta ntakịrị. Nke a bụ naanị ụtọ m. Ihe ... Metal na-adị oke mma. Yabụ ị nwere ime ụlọ nke ikpeazụ. Yabụ, Davin ga-eguzo n'ihu igwefoto ahụ. I we kwue, si, Abiala ije agha. Nọgide na-eme gị, ka m wee nwee ike ime m. ” Thezọ meghekwa, ị ga-awụli elu. REM: Ndi o bu “NEON” otu mgbe? IAN: Ee, aga m agbagbu ya otu oge. Nwere ike were ya otu mgbe… Know mara, I nwere ike ime ọtụtụ ihe ... Nke ahụ ga-abụ ihe m ga-eche. REM: Mgbe ahụ otu n’ime ha Na-atụgharị ... Dị ka nke a Otu esi ewere ya ugbu a Kedu otu ị ga - esi merie ebe a dị mkpa. Na nke a. REM: Enwetara m ụdị nkwakọ ngwaahịa CD mara mma. IAN: Oh n'ezie? Did weghachila ya ọzọ? REM: Emere m ya na anyị (onye na-ese CD). Nkwakọ oghere IAN: Hey jụụ. Ọ bụ ọkwa ọzọ. REM: Nke a obughi akara ozo? IAN: Agaghị m eche nke ahụ. Biko: know mara etu nke a si dị mma? AKLINEKỌ: Ka anyị gee ntị otu otu. IHE KWES :R:: have ga-adọghachi azụ gaa na eriri. LIVE: Ee, ị ga - enwe mmetụta nke "nkụda mmụọ" ka ị na - adọkpụ. REM: N’ikwu eziokwu You ga - eme vidiyo atọ ma ọ bụ abụọ Ọ ga - enyere gị aka karịa ... Ọ bụ ya ... LIVE: Ee, ee ... ọ bụ ihe nwute Naanị ... ihe niile anyị chere na ... IAN: Ọ dị mma, aka nri. LIVE: Echeghị m na ndị nọ n'ụwa ga-amata nke ahụ. IAN: Akpọbidola m ya ugbu a. Nke a siri oke ike ... Ọ dị ihe gbagwojuru anya. Ihe anyị ga - eme ugbu a bụ iji ihe ndị anyị nwere Ana m atụgharị uche n’akụkọ ahụ oke o kwere mee. Kama, ọ bụrụ na ntụzịaka anyị na-aga iche maka ya Usoro ga-agbanwe ka anyị na-aga n'ihu ugbu a. Ọ bụ ya mere anyị ji hapụ ihe a, nke a Enwere ọtụtụ nsogbu. Biko: Ọ pụtapụtara dị iche karịa ka m tụrụ anya ya. Oge Davin agwụla Na Rome, ihe onyonyo a pụtara dị iche karịa otu m siri chee. Naanị ... ihe niile ... na uwe. Anyị mere ike anyị niile, mana ọ rụghị ọrụ. Ikwesighi ịgwụ ike ebe a. M nnọọ… Ekwesịrị m imeghari ọzọ. LIVE: Ihere adighi? IAN: Mba, ọ dị mma tupu mgbe ahụ. Mana amaghim ihe mere m jiri gbanwee ya. Naanị ihe mere o jiri nwetụrụ iju bụ n’ihi okwu egwu. "Na na na na, na na na na, na na na lows" Yabụ, CREAM ga-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ eke. Ọ dị mma, ụda ahụ, tie Ọ ga-abụ ihe ekike piano. IKPERE: Ka anyị burugodị ụzọ mee ihe. LIVE: Naanị mee ya, buru ụzọ. LIVE: Legacy Nwere ike ị yiri eyi. N'olu olu siri ike Ewoo, m achọpụ egwuregwu! IAN: Ee, nke ahụ bụ ntakịrị ihe Ga-enwe mmetụta. Ọnwa abụọ tupu ahapụta album REM: Oroma Eunbyeol (stylist): ọ bụ oroma? Emebeghị m oroma ma. Ọ kwesịrị mmanụ oroma. REM: Nke a dị mma na oroma Oh chere, akara ahụ mere nke ahụ? Nwa Onye ọ bụla nwere mmasị na nke a. Jeong Geun (stylist): Enweghị m ike ịpụ n'aka m. REM: Nke mbu, enwere naanị nkpuchi abụọ Jun Yong (Stylist Ashe): Nke a ezighi ezi REM: Kedu maka omenala? Eunbyeol: Ọ́ gaghị adị mma ka ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị ka eriri nkpuchi n'akụkụ ya? Nwere ike itinye ya ebe a dị ka nke a Achọrọ m eriri dị ka nke a REM: Ama m ihe m na-ekwu. IAN: Anọ m na-eche, ma ọ bụrụ Ọ bụrụ na Dabin nwere ike ịnwe bandana ma ọ bụ obere ojii. Ka m wee nwee ike ikpuchi akụkụ m. REM: Eleghị anya Olu ahụ masịrị m. Eunbyeol: Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na Davin pụọ LIVE: Ọgwụgwụ? Sky Star: Nnọọ njedebe. IAN: Olee otú ọ dị? Can nwere ike ịga ije? Can nwere ike ịkwaga? LIVE: Ee, o di nma. IAN: A ga-eke ya n’akpa gị. LIVE: Ee. IAN: Ọ dị mma. N'agbanyeghị ezigbo DPR meere album a, Ọtụtụ egwu na ọtụtụ demos na-agwụbeghị. Ka oge ngwụcha na-abịa, anyị na-anwa ịchọpụta ihe Live kwuru maka njem dị mkpirikpi wee gaa bụọ abụ na ebe ọhụrụ, dị anya site na obodo ahụ. LIVE: Echere m na ọ ga-adị mma ịgbanwe ... Ndị mmadụ Iji maa atụ, “Ow, Rap” IGBO: Ọ dị mma, ahụ ruru m ala. Dị mma nke ukwuu LIVE: rụsie ọrụ ike ... Rie nri! Onye Nchịkwa Stunt Team: Ọ bụrụ na ị nweta mmetụta ahụ, mgbe anyị gbapụ ugbu a Iji tọọ ntọala igwefoto Mgbe ị na-eme obere mgbanwe ebe ahụ Echere m na ị nwere ike ime ya. LIVE: Ee. Ahụrụ m. IAN: Ninja… Ninja mbe… Ezigbo ~ LIVE: “Nwere Ike” [Beforebọchị tupu fim ahụ] IAN: Lebe ebe ahụ. Ọ gaghị enwe ike ịpụ ebe ahụ? Ọ ka mma ịhapụ ya? N'ọnọdụ dị ka nke a? Hmm, ọ dị mma, ọ dị mma. [Movie agba ụbọchị ụbọchị] OBARA: O gha m ewe nke a? JunYong: Ee ee. Nke ahụ kwa AKLINEKỌ: M? Akwụsịrị m obere oge mgbe m dọwara ụgbọala. Yongwoo (Onye njikwa): Hey, ị mere ezigbo ọrụ… AKLINEKỌ: A naghị adọba ụgbọala, akwa ... IAN: Ka anyị gaa… Ka anyị ga ... Hoin (Director): Mee ya ... ...Wa ... Agba a na-acha ọcha ugbu a? Hoin: Ehee, mana nke a bụ "LEGACY" uwe a? LIVE: Oh, nke a bụ akụkụ rap? IAN: Ee. Ọ ga-amalite dị ka nke a na mbụ. Ọ dị mma, chee na nke a bụ "NEON". Mana "LEGACY" bidoro n'otu ebe a, mana ị nọ na Mars ugbu a. JunYong: Agara m ebe ahụ. Kwupu ya Biko: Ọ nwuo ọkụ. Echere m na ọ bụ n'ihi ọsụsọ. Onye Nduzi Onye Ndu: are dighi iku ume? IAN: Ọ dị mma. Onye ọkwọ ụgbọ ala Drone (Kim Min-chan) you furu sịga? Mod: Anwụrụ ọkụ! LIVE: Ọ dị mma. IAN: Ọ ga-adaba n’aka gị. Ọ dị mma? Ekem, ke ini ọduọde, afo omụm fi. LIVE: Ka anyi mee otu a oge ozo. IAN: youchọrọ ime ya otu oge? Are na-emetụ bọtịnụ ahụ Gbanwee elu Na-akwọ ya n'ezie. Yongwoo: Dabin, ị ga-agbago ebe ahụ. AKLINEKỌ: 2bọchị 2 IAN: Day 2 Jụụ Ọ dị m ka m nọ ebe a na-eme ihe nkiri. Nke a bụ ihe anyị n’eme. N'ezie “Space Odyssey” na “Star Wars” enweela mmetụta dị ukwuu. Ihe niile m hụrụ ka m na-etolite Ugbu a, anyị ga -… Geronimo Ihe… ! Na igwefoto n'ihu, dịka ọmụmaatụ ... Ọ́ bụghị ihe ọchị? Onwere ihe di otu a. Nwere ike ime ka ị na-agba Site n'ike ... Nwee anụrị. Ana m aga! Biko: Ọ bụ ya, ọ bụ ya! Kurt! Ka anyị gawa! Ọ bụ ya! IAN: Bilie… Ana m ele anya n'akụkụ. LIVE: Ọ dị mma. IAN: Ọ dị mma, ebe niile, na ebe niile. O gafeela, nwanne. Ee ọ gafee! Assistant Director: Ezigbo ọrụ! Ezigbo ọrụ! Otu onwa tupu agbapụta album [Ngwakọta Studio] REM: Akụkụ abụọ chọrọ àjà. Echeghị m na anyị ga-aga tere aka na nka. Dịka ọmụmaatụ, “Oh, anyị kwesịrị belata obere decibel a obere…” Dị ka nke a Ee, enwere m ike ime ya otu oge. Ma anyị agaghị alaghachi azụ. N'ihi na mgbe nke a mere, ihe niile na-egbu oge. IAN: Mana nke a ... REM: Ọ bụrụ na anyị abịaghị n'oge Ma m ji n’aka na ọ ga-adị 100 pasent, pasent 99 n’oge. Tellgwa ndị na-ele ihe a anya Anyị na-abịaru nso. Na maka onye ọ bụla na ọrụ m Nke a bụ ihe kacha akpagbu. Yabụ, anyị niile nọ ebe a Anyị na-emelite ibe anyị M na-aga ịkwakọ ihe ndị a niile ka m nwee ike izipu akwụkwọ ikpeazụ nke ịkụzi ... Ahụ́ erughị m ala ugbu a. Onye na-eduzi eriri: Dị ka 93 na idetuo n'azụ. Echere m na Tremolo ga-eme otu ihe ahụ ma emechaa. Mgbe edechara eriri ndị egwu dị ugbu a "KISS ME" na "Ọ D RESGH RES NSỌ ANYA", ndị otu ahụ malitere ịgwakọta, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa na usoro ịme egwu ahụ. Agbanyeghị, n'ihi nsogbu oge na oge ikpeazụ, DPR kwesiri inwe okike maka etu ha si jiri oge fọdụrụ. REM: Ngwakọta niile ezitere m na mụ (Cream engineer) na mụ taa bụ ndetu ederede ... Anyị ga-ahazi ihe ọnụ ma gwa Dabin ka o nweta nyocha ikpeazụ. LIVE: Ya mere ... (Bọchị (x9) More ... na n'ihu ... na nko Echeghị m na ọ dabara na ... Lowe bụ ihe ... dịkwa “Oh-oh” Ọ ghọrọ ihe a… Chọrọ naanị ... "Oh ee" IAN: Ọ nwere ike ịdị ka nke a ... Ahịhịa site na oyi akwa. LIVE: "M kụrụ a"… IAN: Aka nri, aka nri, aka nri. Ọ dị ụda ọ bụla nwere ike ịgbanwe ya? LIVE: Dekọọ ya. LIVE & IAN: Oh, ọ bụ nke ikpeazụ, nke ikpeazụ. LIVE: Gee ntị. IAN: Tụgharịa ụda. IAN: Kedu ihe ọ bụ na mbụ? REM: O di ala. IAN: Ọ dị mma, aka nri. A ma m ... mana ọ ka m ji eme ya. REM: M na-eji karịa nke a. Ọ dị mma ~ IAN: A na m egwu egwu "HERE GOES NOTHING". Ana m agbalị ime ka abụ a dị ka mmadụ 60 sonyere. Nke a adịghị mfe. Ọ dị mma, ka anyị gee ntị. LIVE: Ọ dị mma Ọ dị mma Ee Ọ gafeela ugbu a. Abụ a ... abụ na-esote a ka nwere. Ugbu a, ihe m ga - eme ugbu a bụ njedebe "NEON" Dị ka ị maara, egwu a na-ekwu, “nsutu gị na-eme ka m jee” ma ọ bụ “Ntutu gị mere ka ọ laa, neon, neon” apụta Eche m na ọ dị mma Akụkụ olu na-atọkwa ụtọ. A na-akpọ ya "Neon" Echeghị m na ndị mmadụ nwere ike ịhụ ma na-enwe "neon". Know ma ihe m chere? Yabụ Ejighi m n'aka. IAN: Ọ dị mma ... Echere m na ọ dị mma. LIVE: Mgbe ahụ kwuo "gị" mgbe "odo, acha anụnụ anụnụ, odo odo, pink". IAN: Ọ dị mma. Echere m na nke ahụ ezuola Echere m na emeela ya. Mixgwakọta, dezie ma na-edekọ ihe na-adịbeghị ka ọ na-agwụ agwụ agwụchachaa. Inggwakọta agwakọta, ọ bụ oge iji gaa na ụlọ ịkụ ọkpọ ịkụ ... LIVE: Nna-ukwu MARA: Ọ dị mma. Egwu LIVE: Gini ka echere banyere ya? Echere m na njedebe nke “ANYA GAGHC EGO” dị mkpa EKPERE: Ka anyị kwụsị ebe a ... tupu ụda abịa Onye Nzizi: N’aka siri ike. REM: Mba, nwannem. LIVE: M ga-abịa oge niile. REM: Nwannem na abia egwu. Onye Ntazi: M ga aga egwu ... IKPERE: Nwannem no kwa oru ..? [Teaser Release ]bọchị] Yongwoo: Ọ dị mma nke ukwuu. Sky Star: N'ezie ọ bụghị. IAN: Ama m, mana ... MGBE: M wepụtara ya na Vimeo na teaser 4k HD. IAN: 4k gbara ọchịchịrị ... ya mere REM: kwusi. Wetuo obi. Biko: took were ọgwụ ọzọ. I were ogwu nke anakpo 4k. IAN: Mba ... Nke a bụ ọrịa ọrụ ... Cheta: Mba. Ọ bụ naanị "ọrịa na-abaghị uru." IAN: tukwasim obi, tukwasim obi. Amaara m na enweghị nnukwu ọdịiche ... LIVE: Nkeji 4 Nkeji 3 hapụrụ. IHE KPỌR:: Bido gị LIVE: Nkeji 2 Readywa dị njikere? Readywa dị njikere? Echeghị m na m dị njikere Ewoo! Ebuola m ya !!! CREAM & Silver Star: you bulitere ya? IAN: Anabatakwa nnọkọ nke 101 m. Nke a bụ obere ụlọ studio m. Ọ na-amasị m idezigharị n'ụlọ m. N’ihi na ọ na-akasi m obi N'ihi na enwere otu a Lori: M ... Biko, nna ukwu ... Ugbu a, m na-edezi "LEGACY". Nke a ga - abụ mbido izizi egwu izizi. Edezi ga-abụ ihe dịka 60-70% nke atụmatụ m Ndị ọzọ na-eme atụmatụ, na-agbapụ ... Goodda ezigbo. Ya mere, vidiyo a dị ezigbo mkpa. N'ihi na vidiyo a pụtara na Da Vin abịala na mbara igwe ọhụrụ a. Nke a bụ isi okwu. Ndekọ ahụ “B AN Ọ BY Ọ BY Ọ B" ”bụ njem gaa na“ DPR global ”ọhụrụ anyị nke anyị na-eke ugbu a. Nke a bụ mmalite. Ndụmọdụ nke iceberg Ọ dị ka igwu egwuregwu. Echere m na anyị kwesịrị itinye ntakịrị oghere n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na i wepụ oroma ... Ihu m wepụrụ ... Mgbe ituchara ma dezigharịa vidiyo egwu ikpeazụ Ndi otu a mere ihe ngosi vidio egwu na ndi egere akwukwo nwere ihe nlere. - @ iiseseoul REM: Ka anyi gaa xx KK: DAMN REM: Onye na-eme nke a? TK & KK: Aka nri (x3) KK: Rom (IAN) xx aria m, xx LIVE: Obi dị m ụtọ n'ihi na m na-eme ụdị ihe a. KK: Ndị na-egwu egwu agaghị ama. Amaghị m ihe ga-eme. Crazy n'ezie Onweghị ihe dị ụkọ. TK: Ọ dị mma, ọ bụrụ na m na-elele ọrụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na egwu dị mma, vidiyo dị ntakịrị. E nwere ụkọ. REM: njikọ adịghị ike KK: Ikwu eziokwu, Enweghị m ike iche maka ihe ọ bụla (otu dị ka gị) Nke ahụ bụ ụdị ara. Releasebọchị ewepụtara album LIVE: Nkeji 37 Ana m echegbu onwe m. MAKA: Anyị nwere ụjọ karịa gị ụmụ nwoke! LIVE: Mmetụta a bụ n'ezie ... Nke a na-ama jijiji karịa nwa nwanyị mbụ m Crazy nwere ara? Ready dịla njikere? Echeghị m na m dị njikere. IAN: Kedu mmeghachi omume? Kedu ihe ndị kwuru? LIVE: Guo, guo, guo n’elu. Guhyo (Ilu): Nkeji 10 Cheta: Onye obula di njikere! LIVE: Oh Chineke m REM: Echere m na m na-ama jijiji. LIVE: Ọ bụ otú a ka ọ dị. Harim (bass): Ewoo! Otu nkeji fọdụrụ! Ewoo! Abia puta!
&quot;LIFT-OFF&quot; | EGO ITA? AKW .KWỌ
< start="2.06" dur="3.94"> Tupu ịmalite vidiyo a, ha malitere oru ahụ obere oge ka njem World World 2018 gasịrị. >
< start="6" dur="6"> Dika njem ahụ gara n'ihu na-aga n’ihu, ọrụ nrụpụta ọhụrụ malitere DP. -Ihe omume ndi choro igugu ajuju, nlebara anya, otu na mmasi. >
< start="12" dur="6"> Vidio a bụ “Ọ BYRY na ANYB BERE?” Emere vidiyo a ọnwa atọ tupu ahapụ, yana akụkụ nke ọrụ ahụ dum. >
< start="18" dur="6.4"> Ihe ndị a na-egosi na usoro ọrụ a na-egosi usoro ọrụ ụbọchị kwa ụbọchị na ọkwa ikpeazụ nke ọrụ ahụ. -Mgba egwu idekọ, nzukọ vidiyo, mkparịta ụka na ibe ya. >
< start="24.42" dur="6.6"> O nwere ihe ndi na emeghi nkpa ma di nkpa nke DPR, akara ntụrụndụ zuru oke yana otu ndị enyi nwere nrọ nke ha. >
< start="40.02" dur="1"> DPR IAN: Ndeewo? >
< start="41.82" dur="1.08"> Kedu ka ị mere? >
< start="44.3" dur="1.2"> Yabụ ... >
< start="45.5" dur="10.7"> Na nkenke, m nọ na-eche ihe ọ ga-adịrị John ka ya duzie usoro nile nke ọba a… >
< start="56.68" dur="2.32"> Site na mmalite ruo na njedebe >
< start="59" dur="2.08"> Um ... Echere m na ọ ga-adị jụụ. >
< start="61.92" dur="2.86"> Igosi ndi mmadu ihe na-eme n’azu. >
< start="64.78" dur="2.62"> Dịka ịmara, ihe DPR egosighi. >
< start="67.52" dur="1.96"> Ọ na-egosikwa anyị ego ole anyị nwetara n’ime ya. >
< start="70.38" dur="2.04"> Ee, gwa m echiche gị. >
< start="73.08" dur="2.08"> Ọ dị mma, ọ dị mma ... Nnọọ. >
< start="75.88" dur="2"> Ọnwa atọ tupu ahapụta album >
< start="90.88" dur="3.42"> DPR LIVE: Ee, mgbe ndị mmadụ nụrụ nke a, ha ga-enwe ihe. >
< start="94.3" dur="0.96"> IAN: Ee. >
< start="95.84" dur="3.28"> LIVE: Enwere m olileanya na ihe ịtụghị anya ga-amasị gị. Ka m na-ege egwu a. >
< start="99.44" dur="1.84"> Site na "HERE AHA OWO" rue "GERONIMO" >
< start="101.66" dur="3.66"> LIVE: Nanị ịnụ nke ahụ, "Oh, nke a abụghị ihe m tụrụ anya ya." >
< start="105.32" dur="0.58"> IAN: Ee, ee. >
< start="106.08" dur="2.28"> LIVE: “Gịnị mere ihe a ga-eji kpalie gị ime otú ahụ?” >
< start="109.46" dur="1.16"> DPR REM: Nọgide na-aga. >
< start="113.3" dur="1.9"> Belata ụda ụda ụgbọ elu >
< start="115.2" dur="1.18"> Ọ bụrụ na ịgbanye mmetụta ndị ọzọ ma ọ bụ ụda n'etiti >
< start="116.38" dur="1.66"> LIVE: * Mmetụta Ọ Na-akpata * Mee Mee Mee >
< start="118.04" dur="1.12"> Biko: Mgbe ahụ ọ na-ada ka ihe dị adị. >
< start="119.98" dur="4.22"> N'ụzọ ahụ, ịgaghị ahọrọ ụzọ doro anya. >
< start="124.7" dur="2.38"> Dị ka o kwesịrị ịdị, ị nwere ike ịgafe n'akụkụ ọzọ. >
< start="127.1" dur="5.1"> Yabụ, ọbụlagodi na anyị elere ya ugbu a, mgbe anyị nọ ọnụ, >
< start="132.22" dur="2.6"> Ma ọ bụ, dị ka ntakịrị nke "hyper loop" >
< start="134.82" dur="2.62"> O nwere oge ị na-eme ihe dịka “mbugharị” dịka Star Wars. >
< start="137.44" dur="3.42"> Ọ bụrụ na ịnwere ike ịme LEDs ndị ahụ obere gburugburu >
< start="140.86" dur="2.96"> IAN: Si n'azụ na-ele anya n'ihu >
< start="144.02" dur="4.18"> Echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọ ga-apụta ntakịrị. >
< start="148.2" dur="2.62"> Nke a bụ naanị ụtọ m. >
< start="151.46" dur="4.08"> Ihe ... Metal na-adị oke mma. >
< start="155.54" dur="1.7"> Yabụ ị nwere ime ụlọ nke ikpeazụ. >
< start="157.24" dur="3"> Yabụ, Davin ga-eguzo n'ihu igwefoto ahụ. >
< start="160.38" dur="3.16"> I we kwue, si, Abiala ije agha. Nọgide na-eme gị, ka m wee nwee ike ime m. ” >
< start="163.68" dur="2"> Thezọ meghekwa, ị ga-awụli elu. >
< start="165.68" dur="0.92"> REM: Ndi o bu “NEON” otu mgbe? >
< start="167.1" dur="2"> IAN: Ee, aga m agbagbu ya otu oge. >
< start="169.1" dur="1.62"> Nwere ike were ya otu mgbe… >
< start="171.22" dur="1.08"> Know mara, I nwere ike ime ọtụtụ ihe ... >
< start="172.32" dur="1.26"> Nke ahụ ga-abụ ihe m ga-eche. >
< start="173.58" dur="2.98"> REM: Mgbe ahụ otu n’ime ha >
< start="176.56" dur="1.36"> Na-atụgharị ... Dị ka nke a >
< start="179.44" dur="1.48"> Otu esi ewere ya ugbu a >
< start="180.92" dur="1.86"> Kedu otu ị ga - esi merie ebe a dị mkpa. >
< start="183.28" dur="1.58"> Na nke a. >
< start="184.86" dur="2"> REM: Enwetara m ụdị nkwakọ ngwaahịa CD mara mma. >
< start="187.08" dur="1.54"> IAN: Oh n'ezie? Did weghachila ya ọzọ? >
< start="188.62" dur="0.74"> REM: Emere m ya na anyị (onye na-ese CD). >
< start="189.36" dur="2.54"> Nkwakọ oghere >
< start="193" dur="1.9"> IAN: Hey jụụ. Ọ bụ ọkwa ọzọ. >
< start="194.9" dur="1.4"> REM: Nke a obughi akara ozo? >
< start="197.34" dur="1.18"> IAN: Agaghị m eche nke ahụ. >
< start="198.52" dur="1.4"> Biko: know mara etu nke a si dị mma? >
< start="216.36" dur="1.74"> AKLINEKỌ: Ka anyị gee ntị otu otu. >
< start="246.68" dur="2.38"> IHE KWES :R:: have ga-adọghachi azụ gaa na eriri. >
< start="249.06" dur="2.66"> LIVE: Ee, ị ga - enwe mmetụta nke "nkụda mmụọ" ka ị na - adọkpụ. >
< start="261.6" dur="1.96"> REM: N’ikwu eziokwu >
< start="263.94" dur="2.04"> You ga - eme vidiyo atọ ma ọ bụ abụọ >
< start="266.9" dur="2.62"> Ọ ga - enyere gị aka karịa ... Ọ bụ ya ... >
< start="273.86" dur="2.22"> LIVE: Ee, ee ... ọ bụ ihe nwute >
< start="276.26" dur="2.6"> Naanị ... ihe niile anyị chere na ... >
< start="279.7" dur="0.84"> IAN: Ọ dị mma, aka nri. >
< start="280.54" dur="2.62"> LIVE: Echeghị m na ndị nọ n'ụwa ga-amata nke ahụ. >
< start="285.18" dur="1.04"> IAN: Akpọbidola m ya ugbu a. >
< start="288.88" dur="1.38"> Nke a siri oke ike ... >
< start="292.72" dur="2.92"> Ọ dị ihe gbagwojuru anya. >
< start="298.1" dur="2.8"> Ihe anyị ga - eme ugbu a bụ iji ihe ndị anyị nwere >
< start="300.9" dur="2.78"> Ana m atụgharị uche n’akụkọ ahụ oke o kwere mee. >
< start="306.36" dur="3.2"> Kama, ọ bụrụ na ntụzịaka anyị na-aga iche maka ya >
< start="309.56" dur="4.02"> Usoro ga-agbanwe ka anyị na-aga n'ihu ugbu a. >
< start="314.08" dur="3.7"> Ọ bụ ya mere anyị ji hapụ ihe a, nke a >
< start="318.2" dur="2.4"> Enwere ọtụtụ nsogbu. >
< start="320.6" dur="2.54"> Biko: Ọ pụtapụtara dị iche karịa ka m tụrụ anya ya. >
< start="323.34" dur="0.96"> Oge Davin agwụla >
< start="324.3" dur="1.04"> Na Rome, ihe onyonyo a pụtara dị iche karịa otu m siri chee. >
< start="325.34" dur="2.5"> Naanị ... ihe niile ... na uwe. >
< start="328.22" dur="2.32"> Anyị mere ike anyị niile, mana ọ rụghị ọrụ. >
< start="330.96" dur="2.6"> Ikwesighi ịgwụ ike ebe a. M nnọọ… Ekwesịrị m imeghari ọzọ. >
< start="338.06" dur="1.26"> LIVE: Ihere adighi? >
< start="341.04" dur="1"> IAN: Mba, ọ dị mma tupu mgbe ahụ. >
< start="342.46" dur="1.24"> Mana amaghim ihe mere m jiri gbanwee ya. >
< start="344.46" dur="3.02"> Naanị ihe mere o jiri nwetụrụ iju bụ n’ihi okwu egwu. >
< start="347.48" dur="2.38"> "Na na na na, na na na na, na na na lows" >
< start="350.4" dur="2"> Yabụ, CREAM ga-eme ka ọ bụrụ ihe ọzọ eke. >
< start="353.1" dur="1.52"> Ọ dị mma, ụda ahụ, tie >
< start="355.18" dur="2.12"> Ọ ga-abụ ihe ekike piano. >
< start="357.3" dur="1.22"> IKPERE: Ka anyị burugodị ụzọ mee ihe. >
< start="358.52" dur="1.18"> LIVE: Naanị mee ya, buru ụzọ. >
< start="379.74" dur="1.02"> Nwere ike ị yiri eyi. >
< start="382.58" dur="1.9"> N'olu olu siri ike >
< start="390.58" dur="0.9"> Ewoo, m achọpụ egwuregwu! >
< start="391.8" dur="1.68"> IAN: Ee, nke ahụ bụ ntakịrị ihe >
< start="393.98" dur="1.1"> Ga-enwe mmetụta. >
< start="418.6" dur="2.46"> Ọnwa abụọ tupu ahapụta album >
< start="426.64" dur="0.88"> REM: Oroma >
< start="427.78" dur="1.78"> Eunbyeol (stylist): ọ bụ oroma? Emebeghị m oroma ma. >
< start="430.98" dur="0.76"> Ọ kwesịrị mmanụ oroma. >
< start="431.74" dur="2.08"> REM: Nke a dị mma na oroma >
< start="433.82" dur="1.74"> Oh chere, akara ahụ mere nke ahụ? >
< start="436.16" dur="0.82"> Nwa >
< start="437.44" dur="1.38"> Onye ọ bụla nwere mmasị na nke a. >
< start="439.16" dur="0.98"> Jeong Geun (stylist): Enweghị m ike ịpụ n'aka m. >
< start="440.14" dur="2.22"> REM: Nke mbu, enwere naanị nkpuchi abụọ Jun Yong (Stylist Ashe): Nke a ezighi ezi >
< start="442.36" dur="0.88"> REM: Kedu maka omenala? >
< start="443.24" dur="4.54"> Eunbyeol: Ọ́ gaghị adị mma ka ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị ka eriri nkpuchi n'akụkụ ya? >
< start="450.06" dur="2.74"> Nwere ike itinye ya ebe a dị ka nke a >
< start="453.38" dur="1.92"> Achọrọ m eriri dị ka nke a >
< start="455.76" dur="1.5"> REM: Ama m ihe m na-ekwu. >
< start="457.96" dur="1.46"> IAN: Anọ m na-eche, ma ọ bụrụ >
< start="459.42" dur="3.22"> Ọ bụrụ na Dabin nwere ike ịnwe bandana ma ọ bụ obere ojii. >
< start="462.64" dur="2.2"> Ka m wee nwee ike ikpuchi akụkụ m. REM: Eleghị anya >
< start="464.84" dur="0.86"> Olu ahụ masịrị m. >
< start="478.92" dur="2.74"> Eunbyeol: Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na Davin pụọ >
< start="482.04" dur="0.58"> LIVE: Ọgwụgwụ? >
< start="482.62" dur="0.84"> Sky Star: Nnọọ njedebe. >
< start="485.04" dur="2.24"> IAN: Olee otú ọ dị? Can nwere ike ịga ije? Can nwere ike ịkwaga? >
< start="487.78" dur="1.76"> LIVE: Ee, o di nma. >
< start="489.92" dur="2.26"> IAN: A ga-eke ya n’akpa gị. >
< start="492.18" dur="0.58"> LIVE: Ee. >
< start="494.34" dur="1"> IAN: Ọ dị mma. >
< start="496.28" dur="3.46"> N'agbanyeghị ezigbo DPR meere album a, >
< start="499.74" dur="3.16"> Ọtụtụ egwu na ọtụtụ demos na-agwụbeghị. >
< start="502.9" dur="3.48"> Ka oge ngwụcha na-abịa, anyị na-anwa ịchọpụta ihe >
< start="506.38" dur="2.96"> Live kwuru maka njem dị mkpirikpi wee gaa bụọ abụ na ebe ọhụrụ, dị anya site na obodo ahụ. >
< start="510.26" dur="2.3"> LIVE: Echere m na ọ ga-adị mma ịgbanwe ... Ndị mmadụ >
< start="512.56" dur="2.26"> Iji maa atụ, “Ow, Rap” >
< start="533.64" dur="2"> IGBO: Ọ dị mma, ahụ ruru m ala. >
< start="535.64" dur="0.9"> Dị mma nke ukwuu >
< start="551.4" dur="1.28"> LIVE: rụsie ọrụ ike ... >
< start="552.68" dur="1.04"> Rie nri! >
< start="588.64" dur="3"> Onye Nchịkwa Stunt Team: Ọ bụrụ na ị nweta mmetụta ahụ, mgbe anyị gbapụ ugbu a >
< start="591.64" dur="1.5"> Iji tọọ ntọala igwefoto >
< start="593.14" dur="1.76"> Mgbe ị na-eme obere mgbanwe ebe ahụ >
< start="594.9" dur="0.74"> Echere m na ị nwere ike ime ya. >
< start="595.64" dur="1.14"> LIVE: Ee. Ahụrụ m. >
< start="609.3" dur="1.92"> IAN: Ninja… >
< start="611.22" dur="0.86"> Ninja mbe… >
< start="613.4" dur="0.9"> Ezigbo ~ >
< start="616.06" dur="0.86"> LIVE: “Nwere Ike” >
< start="619.42" dur="1.94"> [Beforebọchị tupu fim ahụ] >
< start="631" dur="1.52"> IAN: Lebe ebe ahụ. >
< start="640.8" dur="2.6"> Ọ gaghị enwe ike ịpụ ebe ahụ? Ọ ka mma ịhapụ ya? >
< start="644.52" dur="1.68"> N'ọnọdụ dị ka nke a? >
< start="668.54" dur="1.36"> Hmm, ọ dị mma, ọ dị mma. >
< start="674.12" dur="1.88"> [Movie agba ụbọchị ụbọchị] >
< start="676.5" dur="1.52"> OBARA: O gha m ewe nke a? >
< start="678.02" dur="1.08"> JunYong: Ee ee. Nke ahụ kwa >
< start="683.14" dur="2.2"> AKLINEKỌ: M? Akwụsịrị m obere oge mgbe m dọwara ụgbọala. >
< start="686.56" dur="1.38"> Yongwoo (Onye njikwa): Hey, ị mere ezigbo ọrụ… >
< start="687.94" dur="0.72"> AKLINEKỌ: A naghị adọba ụgbọala, akwa ... >
< start="689.14" dur="0.9"> IAN: Ka anyị gaa… >
< start="690.92" dur="1.02"> Ka anyị ga ... >
< start="718.7" dur="3.86"> Hoin (Director): Mee ya ... ...Wa ... Agba a na-acha ọcha ugbu a? >
< start="729.14" dur="1.64"> Hoin: Ehee, mana nke a bụ "LEGACY" uwe a? LIVE: Oh, nke a bụ akụkụ rap? >
< start="731.28" dur="1.58"> IAN: Ee. Ọ ga-amalite dị ka nke a na mbụ. >
< start="732.86" dur="1.46"> Ọ dị mma, chee na nke a bụ "NEON". >
< start="734.32" dur="3.38"> Mana "LEGACY" bidoro n'otu ebe a, mana ị nọ na Mars ugbu a. >
< start="756.62" dur="3.22"> JunYong: Agara m ebe ahụ. Kwupu ya >
< start="759.84" dur="1.64"> Biko: Ọ nwuo ọkụ. >
< start="761.48" dur="1.3"> Echere m na ọ bụ n'ihi ọsụsọ. >
< start="771" dur="0.88"> Onye Nduzi Onye Ndu: are dighi iku ume? >
< start="783.32" dur="0.88"> IAN: Ọ dị mma. >
< start="785.82" dur="1.2"> Onye ọkwọ ụgbọ ala Drone (Kim Min-chan) you furu sịga? >
< start="787.02" dur="1.12"> Mod: Anwụrụ ọkụ! >
< start="791.26" dur="0.72"> LIVE: Ọ dị mma. >
< start="791.98" dur="1.16"> IAN: Ọ ga-adaba n’aka gị. >
< start="793.86" dur="0.92"> Ọ dị mma? >
< start="794.78" dur="1.32"> Ekem, ke ini ọduọde, afo omụm fi. >
< start="804" dur="0.96"> LIVE: Ka anyi mee otu a oge ozo. >
< start="804.96" dur="0.74"> IAN: youchọrọ ime ya otu oge? >
< start="806.18" dur="1.28"> Are na-emetụ bọtịnụ ahụ >
< start="808.14" dur="1.2"> Gbanwee elu >
< start="809.34" dur="1.36"> Na-akwọ ya n'ezie. >
< start="829.76" dur="2.7"> Yongwoo: Dabin, ị ga-agbago ebe ahụ. >
< start="832.62" dur="1.26"> AKLINEKỌ: 2bọchị 2 IAN: Day 2 >
< start="835.14" dur="1.04"> Jụụ >
< start="836.48" dur="2.42"> Ọ dị m ka m nọ ebe a na-eme ihe nkiri. >
< start="839.36" dur="2.06"> Nke a bụ ihe anyị n’eme. >
< start="842.48" dur="2.28"> N'ezie >
< start="844.76" dur="3.46"> “Space Odyssey” na “Star Wars” enweela mmetụta dị ukwuu. >
< start="848.76" dur="2.22"> Ihe niile m hụrụ ka m na-etolite >
< start="852.2" dur="1.98"> Ugbu a, anyị ga -… Geronimo >
< start="854.66" dur="0.6"> Ihe… ! >
< start="867.36" dur="1.14"> Na igwefoto n'ihu, dịka ọmụmaatụ ... >
< start="869.46" dur="1.24"> Ọ́ bụghị ihe ọchị? >
< start="875.06" dur="1.48"> Onwere ihe di otu a. >
< start="879.36" dur="2"> Nwere ike ime ka ị na-agba >
< start="882.66" dur="1.76"> Site n'ike ... Nwee anụrị. >
< start="893.28" dur="0.74"> Ana m aga! >
< start="904.06" dur="0.86"> Biko: Ọ bụ ya, ọ bụ ya! >
< start="905.6" dur="1.12"> Ka anyị gawa! Ọ bụ ya! >
< start="911.04" dur="0.82"> IAN: Bilie… >
< start="912.86" dur="1.06"> Ana m ele anya n'akụkụ. >
< start="915.56" dur="0.64"> LIVE: Ọ dị mma. >
< start="958.22" dur="0.96"> IAN: Ọ dị mma, ebe niile, na ebe niile. >
< start="960" dur="0.98"> O gafeela, nwanne. >
< start="961.62" dur="1.2"> Ee ọ gafee! >
< start="962.82" dur="1"> Assistant Director: Ezigbo ọrụ! >
< start="963.82" dur="2.46"> Ezigbo ọrụ! >
< start="968.58" dur="2.44"> Otu onwa tupu agbapụta album >
< start="971.76" dur="2.72"> [Ngwakọta Studio] REM: Akụkụ abụọ chọrọ àjà. >
< start="974.88" dur="2.22"> Echeghị m na anyị ga-aga tere aka na nka. >
< start="977.1" dur="3.6"> Dịka ọmụmaatụ, “Oh, anyị kwesịrị belata obere decibel a obere…” >
< start="980.7" dur="1.52"> Dị ka nke a >
< start="982.22" dur="1.32"> Ee, enwere m ike ime ya otu oge. >
< start="983.54" dur="1.6"> Ma anyị agaghị alaghachi azụ. >
< start="985.14" dur="2.24"> N'ihi na mgbe nke a mere, ihe niile na-egbu oge. >
< start="987.78" dur="2.24"> IAN: Mana nke a ... >
< start="991.82" dur="1.58"> REM: Ọ bụrụ na anyị abịaghị n'oge >
< start="994.12" dur="4.66"> Ma m ji n’aka na ọ ga-adị 100 pasent, pasent 99 n’oge. >
< start="1004.76" dur="2.16"> Tellgwa ndị na-ele ihe a anya >
< start="1008.44" dur="2.66"> Anyị na-abịaru nso. >
< start="1011.5" dur="2.1"> Na maka onye ọ bụla na ọrụ m >
< start="1015.02" dur="2.96"> Nke a bụ ihe kacha akpagbu. >
< start="1018.72" dur="2.02"> Yabụ, anyị niile nọ ebe a >
< start="1022.02" dur="2.64"> Anyị na-emelite ibe anyị >
< start="1024.66" dur="4.14"> M na-aga ịkwakọ ihe ndị a niile ka m nwee ike izipu akwụkwọ ikpeazụ nke ịkụzi ... >
< start="1031.14" dur="2.42"> Ahụ́ erughị m ala ugbu a. >
< start="1050.14" dur="2"> Onye na-eduzi eriri: Dị ka 93 na idetuo n'azụ. >
< start="1052.14" dur="3.82"> Echere m na Tremolo ga-eme otu ihe ahụ ma emechaa. >
< start="1066.18" dur="6.52"> Mgbe edechara eriri ndị egwu dị ugbu a "KISS ME" na "Ọ D RESGH RES NSỌ ANYA", ndị otu ahụ malitere ịgwakọta, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa na usoro ịme egwu ahụ. >
< start="1072.7" dur="6.06"> Agbanyeghị, n'ihi nsogbu oge na oge ikpeazụ, DPR kwesiri inwe okike maka etu ha si jiri oge fọdụrụ. >
< start="1081.12" dur="5.6"> REM: Ngwakọta niile ezitere m na mụ (Cream engineer) na mụ taa bụ ndetu ederede ... >
< start="1087.32" dur="5.06"> Anyị ga-ahazi ihe ọnụ ma gwa Dabin ka o nweta nyocha ikpeazụ. >
< start="1092.38" dur="3.76"> LIVE: Ya mere ... (Bọchị (x9) >
< start="1101.14" dur="2.6"> More ... na n'ihu ... na nko >
< start="1105.14" dur="2.92"> Echeghị m na ọ dabara na ... >
< start="1108.24" dur="2"> Lowe bụ ihe ... dịkwa >
< start="1110.24" dur="2.36"> “Oh-oh” Ọ ghọrọ ihe a… >
< start="1112.6" dur="3.1"> Chọrọ naanị ... "Oh ee" >
< start="1126.58" dur="1.24"> IAN: Ọ nwere ike ịdị ka nke a ... >
< start="1129.22" dur="1.2"> Ahịhịa site na oyi akwa. >
< start="1153.68" dur="0.92"> LIVE: "M kụrụ a"… >
< start="1154.6" dur="1"> IAN: Aka nri, aka nri, aka nri. >
< start="1156.7" dur="4.14"> Ọ dị ụda ọ bụla nwere ike ịgbanwe ya? >
< start="1164.46" dur="1.16"> LIVE: Dekọọ ya. >
< start="1170.42" dur="2.42"> LIVE & IAN: Oh, ọ bụ nke ikpeazụ, nke ikpeazụ. >
< start="1172.84" dur="1.32"> LIVE: Gee ntị. >
< start="1174.16" dur="2"> IAN: Tụgharịa ụda. >
< start="1187.76" dur="1.26"> IAN: Kedu ihe ọ bụ na mbụ? >
< start="1191.34" dur="1.7"> REM: O di ala. IAN: Ọ dị mma, aka nri. >
< start="1193.04" dur="2.7"> A ma m ... mana ọ ka m ji eme ya. >
< start="1196.4" dur="1.24"> REM: M na-eji karịa nke a. >
< start="1201.2" dur="0.84"> Ọ dị mma ~ >
< start="1204.46" dur="5.36"> IAN: A na m egwu egwu "HERE GOES NOTHING". >
< start="1209.82" dur="5.22"> Ana m agbalị ime ka abụ a dị ka mmadụ 60 sonyere. >
< start="1215.04" dur="2.74"> Nke a adịghị mfe. Ọ dị mma, ka anyị gee ntị. >
< start="1217.78" dur="1.82"> LIVE: Ọ dị mma Ọ dị mma >
< start="1234.44" dur="1.12"> Ee >
< start="1235.56" dur="1.16"> Ọ gafeela ugbu a. >
< start="1237.5" dur="2.68"> Abụ a ... abụ na-esote a ka nwere. >
< start="1256.74" dur="2.58"> Ugbu a, ihe m ga - eme ugbu a bụ njedebe "NEON" >
< start="1261.16" dur="2.54"> Dị ka ị maara, egwu a na-ekwu, “nsutu gị na-eme ka m jee” ma ọ bụ >
< start="1263.7" dur="2.82"> “Ntutu gị mere ka ọ laa, neon, neon” apụta >
< start="1266.52" dur="2.18"> Eche m na ọ dị mma >
< start="1268.7" dur="1.74"> Akụkụ olu na-atọkwa ụtọ. >
< start="1270.44" dur="1.54"> A na-akpọ ya "Neon" >
< start="1272.26" dur="3.7"> Echeghị m na ndị mmadụ nwere ike ịhụ ma na-enwe "neon". Know ma ihe m chere? Yabụ >
< start="1282.12" dur="0.86"> Ejighi m n'aka. >
< start="1282.98" dur="1.26"> IAN: Ọ dị mma ... Echere m na ọ dị mma. >
< start="1284.24" dur="3.42"> LIVE: Mgbe ahụ kwuo "gị" mgbe "odo, acha anụnụ anụnụ, odo odo, pink". >
< start="1287.66" dur="0.56"> IAN: Ọ dị mma. >
< start="1288.22" dur="2.16"> Echere m na nke ahụ ezuola >
< start="1290.38" dur="1.6"> Echere m na emeela ya. >
< start="1291.98" dur="3.44"> Mixgwakọta, dezie ma na-edekọ ihe na-adịbeghị ka ọ na-agwụ agwụ agwụchachaa. >
< start="1295.42" dur="3.64"> Inggwakọta agwakọta, ọ bụ oge iji gaa na ụlọ ịkụ ọkpọ ịkụ ... >
< start="1300.38" dur="1.22"> LIVE: Nna-ukwu >
< start="1314.12" dur="1.24"> MARA: Ọ dị mma. Egwu LIVE: Gini ka echere banyere ya? >
< start="1320.52" dur="3.72"> Echere m na njedebe nke “ANYA GAGHC EGO” dị mkpa >
< start="1324.84" dur="1.84"> EKPERE: Ka anyị kwụsị ebe a ... tupu ụda abịa >
< start="1333.4" dur="1.04"> Onye Nzizi: N’aka siri ike. >
< start="1334.44" dur="1.16"> REM: Mba, nwannem. >
< start="1336.86" dur="1.06"> LIVE: M ga-abịa oge niile. >
< start="1338.4" dur="1.7"> REM: Nwannem na abia egwu. >
< start="1340.1" dur="1.64"> Onye Ntazi: M ga aga egwu ... >
< start="1341.74" dur="1.1"> IKPERE: Nwannem no kwa oru ..? >
< start="1344.04" dur="1.08"> [Teaser Release ]bọchị] Yongwoo: Ọ dị mma nke ukwuu. >
< start="1345.12" dur="0.74"> Sky Star: N'ezie ọ bụghị. >
< start="1347.14" dur="2.68"> IAN: Ama m, mana ... MGBE: M wepụtara ya na Vimeo na teaser 4k HD. >
< start="1349.82" dur="2.68"> IAN: 4k gbara ọchịchịrị ... ya mere REM: kwusi. Wetuo obi. >
< start="1352.5" dur="2.46"> Biko: took were ọgwụ ọzọ. >
< start="1354.96" dur="2.92"> I were ogwu nke anakpo 4k. IAN: Mba ... Nke a bụ ọrịa ọrụ ... >
< start="1357.88" dur="2.66"> Cheta: Mba. Ọ bụ naanị "ọrịa na-abaghị uru." >
< start="1360.54" dur="1"> IAN: tukwasim obi, tukwasim obi. >
< start="1361.94" dur="1.94"> Amaara m na enweghị nnukwu ọdịiche ... >
< start="1364.08" dur="1.02"> LIVE: Nkeji 4 >
< start="1368.9" dur="1.24"> Nkeji 3 hapụrụ. >
< start="1371.26" dur="1.36"> IHE KPỌR:: Bido gị >
< start="1373.68" dur="1.08"> LIVE: Nkeji 2 >
< start="1374.76" dur="1.3"> Readywa dị njikere? >
< start="1377.1" dur="1.04"> Readywa dị njikere? >
< start="1378.14" dur="1.22"> Echeghị m na m dị njikere >
< start="1379.88" dur="0.62"> Ewoo! Ebuola m ya !!! >
< start="1382.48" dur="0.88"> CREAM & Silver Star: you bulitere ya? >
< start="1400.32" dur="5.88"> IAN: Anabatakwa nnọkọ nke 101 m. >
< start="1406.2" dur="2.62"> Nke a bụ obere ụlọ studio m. >
< start="1408.82" dur="2.1"> Ọ na-amasị m idezigharị n'ụlọ m. >
< start="1410.92" dur="0.9"> N’ihi na ọ na-akasi m obi >
< start="1411.82" dur="2"> N'ihi na enwere otu a >
< start="1415.38" dur="1.52"> Lori: M ... Biko, nna ukwu ... >
< start="1417.26" dur="2.84"> Ugbu a, m na-edezi "LEGACY". >
< start="1420.1" dur="2.54"> Nke a ga - abụ mbido izizi egwu izizi. >
< start="1422.64" dur="10.46"> Edezi ga-abụ ihe dịka 60-70% nke atụmatụ m >
< start="1433.1" dur="4.98"> Ndị ọzọ na-eme atụmatụ, na-agbapụ ... >
< start="1440.26" dur="1.28"> Goodda ezigbo. >
< start="1441.54" dur="2.7"> Ya mere, vidiyo a dị ezigbo mkpa. >
< start="1444.24" dur="4.42"> N'ihi na vidiyo a pụtara na Da Vin abịala na mbara igwe ọhụrụ a. >
< start="1448.66" dur="0.84"> Nke a bụ isi okwu. >
< start="1449.5" dur="10.06"> Ndekọ ahụ “B AN Ọ BY Ọ BY Ọ B" ”bụ njem gaa na“ DPR global ”ọhụrụ anyị nke anyị na-eke ugbu a. >
< start="1459.56" dur="1.8"> Nke a bụ mmalite. >
< start="1461.36" dur="1.88"> Ndụmọdụ nke iceberg >
< start="1465.18" dur="1.4"> Ọ dị ka igwu egwuregwu. >
< start="1471.56" dur="2.9"> Echere m na anyị kwesịrị itinye ntakịrị oghere n'ebe ahụ. >
< start="1474.92" dur="1.64"> Ọ bụrụ na i wepụ oroma ... >
< start="1478.62" dur="2.34"> Ihu m wepụrụ ... >
< start="1480.96" dur="2.5"> Mgbe ituchara ma dezigharịa vidiyo egwu ikpeazụ >
< start="1483.46" dur="3.38"> Ndi otu a mere ihe ngosi vidio egwu na ndi egere akwukwo nwere ihe nlere. - @ iiseseoul >
< start="1499.48" dur="1.76"> REM: Ka anyi gaa xx >
< start="1504.9" dur="1.02"> REM: Onye na-eme nke a? >
< start="1505.92" dur="1.24"> TK & KK: Aka nri (x3) >
< start="1507.16" dur="1.46"> KK: Rom (IAN) xx aria m, xx >
< start="1508.62" dur="1.84"> LIVE: Obi dị m ụtọ n'ihi na m na-eme ụdị ihe a. >
< start="1527.26" dur="2.34"> KK: Ndị na-egwu egwu agaghị ama. >
< start="1529.6" dur="3.52"> Amaghị m ihe ga-eme. >
< start="1533.12" dur="1.38"> Crazy n'ezie >
< start="1534.5" dur="2"> Onweghị ihe dị ụkọ. >
< start="1536.5" dur="4.74"> TK: Ọ dị mma, ọ bụrụ na m na-elele ọrụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na egwu dị mma, vidiyo dị ntakịrị. >
< start="1541.24" dur="1.22"> E nwere ụkọ. >
< start="1542.46" dur="0.92"> REM: njikọ adịghị ike >
< start="1543.38" dur="3.8"> KK: Ikwu eziokwu, Enweghị m ike iche maka ihe ọ bụla (otu dị ka gị) >
< start="1547.18" dur="2.22"> Nke ahụ bụ ụdị ara. >
< start="1552.06" dur="1.76"> Releasebọchị ewepụtara album >
< start="1557.64" dur="1.48"> LIVE: Nkeji 37 >
< start="1559.12" dur="1.88"> Ana m echegbu onwe m. >
< start="1564.72" dur="3.94"> MAKA: Anyị nwere ụjọ karịa gị ụmụ nwoke! >
< start="1571.52" dur="2.18"> LIVE: Mmetụta a bụ n'ezie ... >
< start="1573.7" dur="2.02"> Nke a na-ama jijiji karịa nwa nwanyị mbụ m >
< start="1575.72" dur="1.48"> Crazy nwere ara? >
< start="1577.2" dur="1.84"> Ready dịla njikere? >
< start="1579.06" dur="1.86"> Echeghị m na m dị njikere. >
< start="1580.92" dur="1.38"> IAN: Kedu mmeghachi omume? Kedu ihe ndị kwuru? >
< start="1582.3" dur="1.8"> LIVE: Guo, guo, guo n’elu. >
< start="1586.2" dur="1.46"> Guhyo (Ilu): Nkeji 10 >
< start="1589.76" dur="2"> Cheta: Onye obula di njikere! >
< start="1594.5" dur="1.62"> LIVE: Oh Chineke m >
< start="1596.14" dur="2.68"> REM: Echere m na m na-ama jijiji. >
< start="1598.82" dur="1.48"> LIVE: Ọ bụ otú a ka ọ dị. >
< start="1601.94" dur="1.54"> Harim (bass): Ewoo! Otu nkeji fọdụrụ! >
< start="1611.9" dur="1.36"> Ewoo! Abia puta! >